संस्कार कि आडम्वर ? ~ brazesh
संस्कार कि आडम्वर ?
August 04, 2013 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ११३
पछिल्लो हप्ता एउटा गज्जबको अनुभव भयो । एउटा सार्थक परिवर्तनका लागि समाजका तथाकथित पण्डितहरुसंग जुध्ने परिवारको अदम्य साहसको प्रत्यक्षदर्शी बन्न पाइयो । परम्पराका नाममा लादिएका अनावश्यक बोझ बोक्न अस्वीकार गर्नेहरु र संस्कारको नाममा ठड्याइएका अल्गा र विरुप पर्खालहरु भत्काउनका लागि प्रयत्न गर्नेहरुलाई देख्दा वास्तवमै प्रसन्नता भएको थियो । तर के कुसंस्कार र अन्धविश्वासको जालो च्यातचुत पार्न भने जति नै सजिलो छ त ? अहँ, पटक्कै छैन । त्यसैले शायद मनले एकथोक भने पनि मानिसहरु तिनका सामु समर्पण गरिदिन्छन् । अरु कसैले त्यो सबको सुरुवात गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेर मौन बस्छन् । खोलाको वेगको उल्टो पट्टि पौडी खेल्न गाह्रो हुन्छ । तर बेलाबेला यस्ता अघि लाग्नहरु फेला पर्छन् । तिनलाई पच्छ्याालै मात्र पनि आँट चाहिन्छ ।
८० वर्ष नाघेका एकजना आफन्त थिए उनी । पहिलेदेखि नै सँधै आफ्ना छोराहरु र श्रीमतीलाई आफू मरेपछि किरियाको नाममा नौटंकी नगर्नू भन्ने गर्थे । उनलाई लाग्थ्यो, त्यो सब गरेर केही फाइदा छैन । तेहै दिनसम्म हरेक पल दुःख पाएर, अरुलाई देखाउनका लागि गरिने नाटकमाथि उनी पटक्कै विश्वास गर्दैन थिए । त्यसैले उनको चाहना थियो, दाह संस्कार गरेर फर्केपछि सबैले आफ्नो नियमित जीवनशैली अपनाउन् । छोराहरुले कपाल खौरेर, सेतो कपडा बेरेर, परालमा सुतेर, तेह्र दिनसम्म अलिनो नखाउन् । श्रीमतीले सेतो वस्त्र धारण नगरुन्, चुरा नफुटाउन्, पोते नछिनालून् । आफू जाने केही दिन अघि पनि उनले यही कुरा दोहो¥याएका थिए रे । समाजको करकापमा परेर अरुका लागि मात्र भए पनि तिमीहरुले त्यो सब गरेछौ भने मलाई चाहिँ खुसी लाग्ने छैन भनेर उनले स्पष्ट शव्दमा भनेका रहेछन् । उनको निधन भएपछि खवर पाएर घरमा आएका आफन्तहरुलाई छोराहरुले त्यही कुरा सुनाए ।
त्यसपछि सुरु भयो केही तथाकथित आफन्तहरुको नौटंकी । संख्यामा निकै कम भए पनि उनीहरु कुनै हालतमा त्यो स्वीकार्न तयार भएनन् । उदेकलाग्दो कुरा त के भने अरु बेला कहिले कतै कुनै कुरामा वास्ता नगर्नेहरु नै त्यतिबेला सबैभन्दा बढी चम्किरहेका थिए । परम्परा र संस्कृति भाँड्न हुँदैन, पाइँदैन भनेर उनीहरु त्यो कठीन पललाई झनै बढी जटिल बनाइरहेका थिए । जब जाने मान्छेको इच्छा नै थिएन भने त्यो सब किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उनीहरुसंग तर्क थिएन तर उनीहरु लिंडेढिपी छोड्न तयार थिएनन् । मृतकको परिवारलाई त्यो विपतको बेला झनै अन्यौलग्रस्त र मानसिक रुपमा बिथोल्न उनीहरु पछि परेनन् ।
आफन्तको दायित्व भनेको के हो भन्ने प्रश्न यहाँ नेर बडो सान्दर्भिक हुन्छ । आफन्त, शुभचिन्तक र नातागोता भनेको अप्ठ्यारोमा चाहिन्छन् । उनीहरुको काम भनेको त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साथ दिनु हो । विपत परेकाहरु जसरी आफ्नो त्यो दुखद घडीमा सहज हुन्छन्, त्यसलाई सघाउनु र समर्थन गर्नु हो ।
तर त्यसको विपरित त्यहाँ आफन्त भनिनेहरु अझै बढी कष्टकर वातावरण बनाउन तम्सिएका थिए । चलिआएको परम्परा यसरी तोड्न कहाँ पाइन्छ भन्दै उनीहरु चुरा फुटाउने ढुंगा खोज्न थालेका थिए । आफ्नो बाबुले जीवनभर जुन कुराको विरोध गरे, जानु अघि पनि जुन कुरा नगर्न भनेर दोहो¥याए, त्यसको कदर नगरी अरुको करमा किन ती सब निरर्थक संस्कारहरु गर्नु भन्ने तर्कको उनीहरुमा कुनै असर परिरहेको थिएन ।
उनीहरु त्यहाँको वातावरणलाई थप बोझिल बनाउन अचम्मका तर्कहरु गर्न थालेका थिए । मर्ने मान्छेले जे भनेको भए पनि त्यसको अर्थ हुँदैन र जीवित नातागोताको इच्छाको कदर गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको तर्क थियो । आफूहरु त्यहँ आइदिए पछि मन राख्न भए पनि सबै गर्नुपर्छ भन्ने ढीठ गर्दै थिए ।
आज यो संस्कार नगरे भोलि परिवारमा विपत्ति आइपर्दा यसैको कारणले हो भनेर पछुताउनु भन्दा चलिआएको चलन गर्नुपर्छ भन्ने कुतर्क गरेर आशंकित र त्रस्त बनाउने सम्मको हदमा उनीहरु ओर्लिसकेका थिए । सबैभन्दा बढी मानसिक रुपमा मान्छे त्यो बेला आक्रान्त हुन्छ, जतिबेला उसको परिवारमा कुनै प्रियजनको निधन भएको हुन्छ । त्यही बेला आघात पु¥याउने दाउमा किन रहन्छन् नातागोता भनाउँदाहरु ? साधारण अवस्थामा अरुको जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न, आफूले चाहेको गराउन सकिन्न तर यस्तो कमजोर क्षणमा मात्र आफ्ना कुराहरु मनाउन सकिन्छ भनेर ?
अधिकांश अरु नातागोताहरु भने त्यो परिवारको कुरामा सहमत पनि थिए । निकै बेरको माथापच्ची पनि जब उनीहरुले आफ्नो पिताको आज्ञा विपरित ढकोसला नगर्ने नै निर्णय गरे, कुसंस्कारका पक्षधरहरुले अन्तत समर्पण गर्न वाध्य हुनै प¥यो । तर आर्यघाटमा दाहसंस्कार सकिएपछि पनि उनीहरु आफ्नो कुरा मनाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका नै थिए । कतिसम्म भने, हुक्का पानी बाराबार गर्ने धम्की समेत पनि उनीहरुले अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरे । के त्यस्तो सम्वेदनशील अवस्थामा कसैलाई त्यसरी ब्ल्याकमेल गर्नु आफन्त र नातागोतालाई शोभा दिन्छ ? कसैले स्वेच्छाले संस्कारका नाममा आजसम्म पालिएका औपचारिकता र आडम्वरलाई तिलाञ्जलि दिन चाहन्छ भने त्यसलाई समर्थन गर्नुको साटो तर्साउने र दुरुत्साहित गर्ने काम गर्नु कसैलाई शोभा दिंदैन । आफन्त र परिवारलाई त झनै होइन ।